Faah faahin:- Weerarkii xooganaa ee lagu qaaday Hoteel Dayax iyo qasaaraha ka dhashay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerarkii xooganaa ee lagu qaaday Hoteel Dayax iyo qasaaraha ka dhashay (SAWIRO)
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qaaday Hoteel Dayax oo ku yaala agagaarka Isgoyska Dabka ee magaalada Muqdisho.
Weerarkaan ayaa markiisii hore ku bilawday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay iridka ee Hoteelka, wuxuuna markii dambe isku badalay dagaal fool ka fool ah oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo raggii weerarka soo qaaday.
Dagaalkaasi ayaa si toos ah u bilawday kadib markii raggii weerarka soo qaaday ay gudaha u galeen Hoteelka, waxayna xilligaasi iska caabin aad u xoogan kala kulmeen ciidankii ilaalada ka ahaa Hoteelka.
Dad u badan shacab ayaa la sheegayaa inay waxyeelo aad u xoogan kasoo gaartay qaraxii labaad ee ka dhacay banaanka hore ee Hoteelka.
Qaraxaasi labaad ayaa la sheegayaa inuu dhacay waxyar kadib markii ragga weerarka soo qaaday ay gudaha u galeen Hoteelka.
Warar hordhac ah oo aynu heleyno ayaa sheegaya in ku dhawaad 15 qof ay ku dhimatay weerarkaasi, halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa islamarkiiba soo gaaray gaadiidka gurmadka deg-dega oo goobtaasi ka qaadaya dadkii ku dhaawacmay weerarka.
Ma jirto cid illaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi, balse Al-shabaab ayaa hore u shaacisay inay beegsan doonaan goobaha ay ku sugan yihiin siyaasiyiinta iyo dadka la shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliya.
Hoteelka Dayax ayaa ah Hoteel si casriyeesan u dhisan islamarkaana ay degan yihiin xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, waxaana weli gudaha hoteelkaaasi laga dhex maqlayaa rasaas culus.
Wixii warkaan kusoo kordha kala soco wararkeena dambe Insha Allaah